Ndingaita Sei Kuti Ndiwane Nguva Yakakwana Yekurara | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kuti Ndiwane Nguva Yakakwana Yekurara?
Kana maths dzichikunetsa, unogona kufunga kuti ndinofanira kuwedzera kushanda nesimba. Kana usiri kubudirira pamitambo, unogona kufunga kuti ndinofanira kuwedzera kudzidzira mutambo wacho. Asi dzimwe nguva, chinhu chinenge chichingodiwa kuwedzera nguva yekurara. Inzwa kuti nei tichidaro.
Nei kurara kuchikosha?
Chii chiri kukutadzisa kurara?
Ungaita sei kuti uwane nguva yakakwana yekurara?
Vaongorori vanoti vechidiki vari kuyaruka vanofanira kurara maawa 8 kusvika ku10. Zvakakosherei kuti munhu anyatsorara?
Kurara kunoita kuti pfungwa dzipinze. Vamwe vanoti kurara ndiko “kudya kwepfungwa.” Kunogona kukubatsira kuti uwedzere kugona kuchikoro, pamitambo, uye pakugadzirisa matambudziko.
Kurara kunoita kuti uve nemafungiro akanaka. Vanhu vasingawani nguva yakakwana yekurara havatani kugumbuka, vanogara vakasuwa kana kuti vachizvidya mwoyo, uye havanyatsowirirana nevamwe.
Kurara kunobatsira mutyairi kuti asapinda munjodzi. Imwe ongororo yakaitwa kuUnited States yakaratidza kuti vatyairi vane makore ari pakati pe16 ne24 “kakawanda kacho tsaona dzavanoita dzinokonzerwa nekutsimwaira” kana zvichienzaniswa nevane makore ari pakati pe40 ne59.
Kurara kunoita kuti munhu ave neutano huri nani. Kurara kunobatsira muviri kuti ukwanise kugadziridza masero netsinga dzeropa. Kunyatsorara kunoderedza mikana yekufuta, yekubatwa nechirwere cheshuga uye yekuita sitiroko.
Foni inofanira kuchajiwa kuti irambe ichishanda. Zvakangofananawo nekurara, kunokosha kuti ukwanise kuzoshanda kana kwayedza
Pasinei nezvichangobva kutaurwa, vechidiki vakawanda havasi kuwana nguva yakakwana yekurara. Elaine ane makore 16 anoti:
“Mudzidzisi wangu akabvunza kirasi yedu kuti tinorara nguvai. Vakawanda vakati na2:00 kwava kuedza uye vamwe vakati na5:00. Mumwe chete ndiye akati 9:30 manheru.”
Zvii zvinogona kukutadzisa kuwana nguva yakakwana yekurara?
Kutandara. “Zviri nyore kunonoka kurara kunyanya mazuva andinoswera ndichitandara neshamwari dzangu.”—Pamela.
Zvekuita. “Ndinoda kurara, asi zvakaoma kuti ndiwane nguva yacho nekuti ndine zvakawanda zvekuita.”—Ana.
Zvinhu zvinovaraidza. “Foni yangu ndiyo inonyanya kunditadzisa kurara. Handigoni kuiisa pasi kana ndiri mumagumbezi.”—Anisa.
Ungaita sei kuti uwane nguva yakawanda yekurara?
Unokoshesa kurara here? Bhaibheri rinoti: “Zviri nani kuzorora zvishoma pane kushanda zvakaoma zvakapetwa kaviri asi uchidzingana nemhepo.” (Muparidzi 4:6) Kurara kwakakosha. Kana ukatadza kuwana nguva yakakwana yekurara, zvichakanganisa mashandiro ako kunyange mufaro wako chaiwo unoderera!
Ziva chinoita kuti utadze kurara. Unotandara neshamwari dzako kusvika nguva dzaenda here? Homuweki uye mabasa epamba zviri kukuwandira here? Foni yako inokutadzisa kurara nenguva here kana kuti inokumutsa watorara?
Zvekufunga nezvazvo: Kukwanisa kusiya zvinhu zvinokutadzisa kurara hakusi nyore, asi ukabudirira uchaona kuti unenge washandira zviripo. Zvirevo 21:5 inoti: “Zvirongwa zvomunhu anoshingaira zvinobatsira.”
Zvinoshanda kune mumwe munhu zvinogona kusashanda kune mumwe munhu. Vamwe vanoti kumborara zvishoma masikati kunovabatsira kuti vazorara usiku. Asi vamwe vanoti kuita izvozvo kunozovatadzisa kurara usiku. Saka ita zvinokushandira. Zvinhu zvinotevera zvinogona kukubatsira:
Zvipe nguva yekuti uzorore. Kana ukawana nguva yekuzorora usati warara, uchakwanisa kukurumidza kubatwa nehope.
“Unofanira kukurumidza kupedza homuweki nemabasa epamba kuitira kuti usazotanga kufunga nezvazvo paunenge wava kunorara.”—Maria.
Tora matanho. Panzvimbo pekukundwa nezvinhu zvinokutadzisa kurara, tora matanho ekuti ugadzirise zvinhu kuitira kuti uwane nguva yekunyatsorara.
“Ndinoda kurara maawa 8 pazuva. Asi kana ndichifanira kuzokurumidza kumuka ndinobva ndakurumidza kurara kuitira kuti maawa angu ekurara asashota.”—Vincent.
Usachinja-chinja nguva yekurara. Muviri wako unopedzisira wava kuziva nguva yaunofanira kunorara. Vaongorori vanokurudzira kuti usachinja-chinja nguva yaunorara uye yaunomuka. Imbozviedza kwemwedzi mumwe chete uone kubatsira kwazvinoita.
“Kana ukava nenguva imwe chete yaunorara, paunozomuka, unomuka uchinzwa kuti wakanyatsozorora. Izvi zvichakubatsira kuti unyatsoita mabasa ako nemazvo.”—Jared.
Ziva pekugumira pakutandara. Bhaibheri rinoti tinofanira kuva ‘nemwero’ uye izvozvo zvinosanganisira nguva yekutandara.—1 Timoti 3:2, 11.
“Ndakadzidza kuti handifaniri kunyanya kutandarisa kana ari manheru. Kana ndikasazviudza nguva yandinofanira kuonekana nevamwe ndinoziva kuti ndichanetseka nehope!”—Rebecca.
Dzima foni kana wava kurara. Kana wasara neawa kuti urare, usaenda paIndaneti kana kutumira mameseji kushamwari dzako. Vamwe vaongorori vanoti chiedza chinobva pafoni, paTV kana kuti patablet chinogona kutadzisa munhu kurara.
“Vanhu vanoda kuti urambe uchiwanika nguva dzese. Asi kuti ukwanise kunyatsozorora, unofanira kumbosiya foni.”—Julissa.
“Ziva nguva yaunofanira kurara uye usachinja-chinja. Kana uine nguva yaunowanzoenda kunorara muviri wako unopedzisira wava kuzviziva.”—Bailey.
“Rega kuva netsika yekunonoka kurara. Kurara kunobatsira muviri wako uye kunoita kuti uve akachangamuka paunenge wava kuita mabasa ako paunozomuka.”—Katie.
“Kana muchitandara, zvakaoma kuti uve wekutanga kusimuka uchionekana nevamwe. Asi kuziva kuti haukwanisi kufadza munhu wese kucharatidza kuti wava kufunga semunhu mukuru.”—Lorenzo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kuti Ndiwane Nguva Yakakwana Yekurara?
ijwyp nyaya 87
Chii Chiri Kudzora Chimwe​—Ndiwe Here Kana Kuti Ifoni Yako?